यूट्यूब भिडियो थम्बनेल छवि डाउनलोड गर्नुहोस् - प्राय: वेबसाइटहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्
यूट्यूब भिडियो थम्बनेल छवि डाउनलोड गर्नुहोस्
❤ यस साधारण उपकरणको साथ कुनै पनि YouTube भिडियोको सबै थम्बनेल छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
कुनै पनि YouTube भिडियोको भिडियो थम्बनेल प्राप्त गर्न तलको पाठ बाकसमा भिडियोको नियमित URL प्रविष्ट गर्नुहोस्।
⚠ तपाईंको URL यस्तो देखिनुपर्दछ:
YouTube थम्बनेल पाउनुहोस्
यस साइटले तपाईंलाई भिडियो URL प्रविष्ट गरेर कुनै पनि YouTube भिडियोहरूको थम्बनेलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
⚠ बुकमार्क बटनको नयाँ संस्करण छ। अब अपडेट गर्नुहोस्।
⚠ केहि सामाजिक नेटवर्कहरू पृष्ठ पुन: लोड गर्नु पर्छ तपाईंले हाल हेरिरहनु भएको सहि थम्बनेल प्राप्त गर्न।
♳ सर्भर 1
♴ सर्भर 2
♵ सर्भर 3
✚ सुझावमा जोड्नुहोस्
❝सुझावहरू थपेर भिडियोहरूको लागि हेराइहरू बढाउनुहोस्❞
☀ थम्बनेल Grabber बाट थम्बनेल डाउनलोड गर्न समर्थन गर्दछ Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop र अधिक. ☁
किन यो रमणीय उपकरण छनौट गर्नुहोस्?
छिटो र नि: शुल्क क्रोधित छैन
धेरै अतिरिक्त उपकरणहरू
प्राय: वेबसाइटहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्
❝तस्वीर सूची मात्र तपाईंको उपकरणमा बचत गरिएको छ❞
♻ ईतिहास खाली गर्नुहोस्
राम्रो विचारहरू फेला पार्न सुझाव बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि म्याक ओएस एक्स प्रयोग गर्दै
युट्यूब पोस्टर निकाल्नुहोस्
एक क्लिकमा सबै यूट्यूब भिडियो थम्बनेलहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
थम्बनेल पाउनुहोस् 2.0 ← यसलाई तपाईंको बुकमार्क पट्टीमा तान्नुहोस्
❝यस स्क्रिप्टले कुनै पनि वेबसाइटबाट भिडियो पोस्टर निकाल्न सक्छ।❞
कसरी YouTube थम्बनेल छवि जेनरेटर को उपयोग गर्ने
चरण 1 : YouTube युआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस्
प्रदान गरिएको फिल्डमा युट्यूब भिडियो यूआरएल प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस्।
चरण2: क्लिक गर्नुहोस् ❝YouTube थम्बनेल पाउनुहोस्❞
पूर्वावलोकन गर्न र YouTube थम्बनेल छवि डाउनलोड गर्न, सुन्तला बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
चरण3: YouTube भिडियो थम्बनेल छवि प्राप्त गर्नुहोस्
बहु छवि छवि र आकारमा YouTube बाट थम्बनेल छवि डाउनलोड गर्नुहोस्
नि: शुल्क YouTube थम्बनेल डाउनलोडर
डाउनलोड गर्नु भन्दा पहिले पूर्वावलोकन गर्नुहोस्
भिडियो URL टाँस्ने पछि तपाईं सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहुँदा, सबै थम्बनेल छविहरूको पूर्वावलोकन प्रदान गरिन्छ। तपाइँ थम्बनेल छवि आकार जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईको उपकरणमा YouTube भिडियोको सम्बन्धित थम्बनेलहरू बचत गर्न।
तपाईंको उत्तम छवि आकार छान्नुहोस्
तपाईंको छनौट अनुसार विभिन्न आकारमा YouTube भिडियो थम्बनेल छवि प्राप्त गर्नुहोस्। जब तपाईं एक्स्ट्र्याक्ट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, बहु आकारमा पूर्वावलोकन थम्बनेल छवि प्रदान गरिन्छ। तपाईं 8080०x360०, १२०x 120०, 20२०x१80०, १२80०x7२० बीच थम्बनेल आकार चयन गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्।
यूट्यूब थम्बनेल छवि एक्स्ट्रैक्टर अनलाइन सेवा हो जसले तपाईंलाई HD मा YouTube भिडियोबाट थम्बनेल छविहरू पूर्वावलोकन र डाउनलोड गर्न दिन्छ। तपाइँ तपाइँको कुनै पनि मनपर्ने प्लेटफर्म जस्तै विन्डोज उपकरण, लिनक्स ओएस, म्याक मेशिन, एन्ड्रोइड, वा आईफोन बाट YouTube बाट थम्बनेल छवि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
शून्य सीमितता संग निःशुल्क
यो YouTube थम्बनेल छवि बचत गर्न पूर्ण नि: शुल्क अनलाइन सेवा हो। तपाइँले मात्र लि enter्क प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ र मिनेटमा YouTube भिडियोको थम्बनेल छवि प्राप्त गर्नुहोस्। थप रूपमा, सेवा कुनै सीमितताबाट पनि स्वतन्त्र छ। यो पूर्ण रूपमा ब्राउजरमा आधारित अनुप्रयोग हो र कुनै पनि प्लेटफर्म वा उपकरणबाट पहुँच गर्न सकिन्छ।
यहाँ तपाइँका प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी YouTube भिडियो थम्बनेलहरू डाउनलोड गर्ने?
+ थम्बनेल के हो?
थम्बनेलहरू वेब पृष्ठमा आदर्श छविको सानो प्रतिलिपिको रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ, किनकि वेब पृष्ठमा थम्बनेल छविको एक उद्देश्य भनेको ब्यान्डविथ र डाउनलोड समय घटाउनु हो।
केहि वेब डिजाइनरहरू HTML वा ग्राहक-साइड स्क्रिप्टि thumbको साथ थम्बनेलहरू उत्पादन गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताको ब्राउजरले चित्रलाई सानो बनाउँदछ, छविको सानो प्रतिलिपि प्रयोगको सट्टा।
+ के म उच्च रिजोलुसनमा मेरो भिडियोबाट सबै YouTube भिडियो थम्बनेलहरू निकाल्न सक्छु?
हो, तपाईं सजिलैसँग यो डाउनलोडकर्ता सेवा प्रयोग गरेर तपाईंको यूट्यूब भिडियोको सबै थम्बनेलहरू निकाल्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
यूट्यूब भिडियोबाट थम्बनेल छवि प्राप्त गर्न केवल तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
YouTube भिडियो थम्बनेल डाउनलोडर वेबपृष्ठ खोल्नुहोस्।
YouTube.com हेर्नुहोस् र तपाईंको यूट्यूब भिडियो लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्
यसलाई यूट्यूब भिडियो लिंक बक्समा टाँस्नुहोस्।
तपाईंको भिडियोको सबै थम्बनेलहरू द्रुत रूपमा समात्न एक्सट्रैक्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
हाम्रो YouTube भिडियो थम्बनेल डाउनलोडरले तपाइँको भिडियो बाट सबै निकाल्ने यूट्यूब थम्बनेलहरू चाँडै प्रदर्शन गर्दछ।
तपाईं सजिलैसँग सबै थम्बनेल छविहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको आकारहरू पिक्सेलमा जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई डाउनलोड गर्न आवश्यक छ भने, त्यसो भए तपाईं डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर सम्बन्धित यूट्यूब भिडियो थम्बनेलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँको भिडियो थम्बनेलहरू को मजा लिनुहोस्।
तपाइँले तपाइँको YouTube भिडियो थम्बनेल छविहरू बचत गर्न माथिको साधारण चरणहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
+ YouTube थम्बनेल कुन आकार हो?
यूट्यूब भिडियो थम्बनेलहरू चार विभिन्न गुणहरू र आयामहरूमा उपलब्ध छन्: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
तपाईं मानक ढाँचाबाट यूट्यूब भिडियोको कुनै आकार आकार थम्बनेल छवि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंलाई भर्खर अद्वितीय भिडियो आईडी चाहिन्छ, जुन भिडियो यूआरएलमा हेर्न सकिन्छ।
थम्बनेल छवि ढाँचा: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
तपाईंले चाहनुभएको थम्बनेलको आकारमा निर्भर गर्दै तपाईं फाइल नाम परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ। केहि सामान्यतया प्रयोग तल सूचीकृत छन्:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – मध्यम पूर्वनिर्धारित
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – उच्च रिजोलुसन
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – सानो
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – सानो
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – सानो
+ YouTube थम्बनेल Grabber वा जेनरेटर को उद्देश्य के हो?
यस युट्युब थम्बनेल मेकरको मुख्य उद्देश्य यो हो कि तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र YouTube भिडियो थम्बनेल छवि छविहरू कुनै पनि भिडियोबाट कुनै पनि आकारमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै छविहरू वास्तवमै अगाडि काममा मद्दत गर्दछ जस्तै ब्लगि,, डिजाईन, वा अन्यसँग साझेदारी गर्न।
+ सबै कस्ता आकार विकल्पहरू डाउनलोड गर्न वा अनुकूलित भिडियो स्प्लैश स्क्रिन सिर्जना गर्न हो?
यस युट्युब थम्बनेल छवि एक्स्ट्रेक्टरले स्प्ल्याश स्क्रिन बचत गर्दा चार फरक आकार विकल्पहरू प्रदान गर्दछ:
+ YouTube थम्बनेल आकार २०१० के हो?
यूट्यूब अनुकूलन थम्बनेल छवि सकेसम्म ठूलो हुनुपर्दछ, किनकि छवि पनि इम्बेडेड प्लेयरमा पूर्वावलोकन छविको रूपमा प्रयोग हुनेछ। यूट्यूबले तपाइँको अनुकूलन थम्बनेलहरूको सिफारिश गर्दछ: १२x०x7२० को रिजोलुसन राख्नुहोस् (minimum p० पिक्सेलको न्यूनतम चौडाइको साथ)।
+ म कसरी भिडियो बाट स्नापशट लिन सक्छु?
भिडियोलाई त्यस विन्दुमा रोक्नुहोस् जहाँ तपाइँ छवि खिच्न चाहानुहुन्छ, छवि प्राप्त गर्न प्रिन्ट स्क्रिन वा स्निपिंग उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
+ तपाइँ यूट्यूबमा थम्बनेल छवि कसरी फेला पार्नुहुन्छ?
थम्बनेलहरूको आकार प्राप्त गर्न माथिको पाठ बक्समा तपाईंको युट्यूब युआरएल टाँस्नुहोस्।
+ युट्यूबमा कभर फोटोको आकार कति छ?
YouTube कभर फोटो / च्यानल आर्ट: 2560 x 1440 pixels.
YouTube ले प्रतिक्रियाशील वेब डिजाइन प्रयोग गरेर तपाईंको च्यानल आर्टवर्क स्केल गर्दछ। YouTube ले २ art60० x १4040० पिक्सेलमा २ एमबी अधिकतम फाईल आकारको साथ च्यानल आर्ट अपलोड गर्न सिफारिश गर्दछ।
+ म कसरी यूट्यूब थम्बनेलको लागि इम्बेड कोड प्राप्त गर्न सक्छु?
एक विशिष्ट भिडियोको लागि तपाईंको YouTube थम्बनेल छविहरू पुनःप्राप्त गर्न धेरै नै सजिलो छ।
केवल तलका URL मा जानुहोस्: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
अब, तपाईंले कि त भिडियो url बाट वा यूट्यूब भिडियोको इम्बेड कोडबाट भिडियो आईडी ल्याउनु पर्छ।
+ म युट्यूबबाट छवि कसरी प्रतिलिपि गर्ने?
यूट्यूबबाट तपाईंको भिडियो आईडी पाउनुहोस् र माथिको टेक्स्टबक्समा टाँस्नुहोस्, बटन क्लिक गर्नुहोस् ❝YouTube थम्बनेल पाउनुहोस्❞.
+ एक मान्य YouTube भिडियो URL के हो?
+ थम्बनेल 1080p डाउनलोड कसरी गर्ने?
यूट्यूब भिडियो थम्बनेलको अधिकतम रिजोलुसन १२80०x7२० हो।
1080p थम्बनेलहरू उपलब्ध छैनन्।
छवि प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले स्क्रीन प्रिन्ट कुञ्जी संयोजन प्रयोग गर्नुपर्दछ।
प्रेस Alt + Print Screen.
केही मोडलहरूले सफा स्क्रिन प्रिन्ट कुञ्जी लेख्न सक्दछ PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
यदि म्याक ओएस एक्स प्रयोग गर्दै, प्रेस Shift + ⌘ + 3
+ के यो YouTube थम्बनेल डाउनलोड सेवा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
सुरक्षा हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो, त्यसैले यो वेबसाइटको सम्पूर्ण डाटा यातायात SSL एन्क्रिप्टेड हो। यस सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकलको साथ, तपाईंको डाटा तेस्रो पक्षहरूद्वारा पहुँचबाट सुरक्षित गरिएको छ। यूट्यूब सर्वरमा सिधा ईन्क्रिप्टेड जडान मार्फत चालू वास्तविक थम्बनेल छविहरूका डाउनलोड।
छवि अनलाइनमा प्ले बटन थप्नुहोस्
YouTube भिडियो स्क्रीनशट अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्
अनुकूलन स्थितिबाट एक स्क्रीनशट लिनुहोस्
युट्यूब भिडियो उपशीर्षकहरू बचत गर्नुहोस्
कुनै पनि वेबसाइटबाट भिडियो र अडियो चाँडै डाउनलोड गर्न मद्दत गर्नुहोस् (यूट्यूब समावेश नगर्नुहोस्)
YouTube सदस्यता प्रबन्धक
यूट्यूबका लागि रंग परिवर्तनकर्ता
युट्यूबको लागि नियन्त्रण
YouTube टिप्पणीहरू लुकाउनुहोस्
YouTube को लागि रेडियो मोड
इक्वेलाइजर र यूट्यूबको लागि एम्प्लीफायर
शीर्ष नयाँ गीतहरू
कसरी यूट्यूब अनुकूलन थम्बनेलले तपाईंलाई अधिक विचारहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
उत्तम YouTube थम्बनेल खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाइँको आफ्नै अनुकूलन थम्बनेल डिजाइनहरू सिर्जना गर्न प्रेरणा पाउन चाहनुहुन्छ? तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ!
कस्टम थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नु तपाईंको ब्रान्डलाई सम्पूर्ण रूपमा उन्नत गर्ने उत्तम तरिका मात्र होईन, तर यो उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये तपाइँको भिडियो छनौट गर्न दर्शकहरूलाई प्रभाव पार्ने एउटा तरिका पनि हो। होईन, कस्टम थम्बनेलले तपाईंको सामग्रीलाई यो भन्दा राम्रो बनाउँदैन त्यसैले गुणस्तरीय सामग्री सिर्जनामा ​​ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ - तर थम्बनेलले तपाईंको भयानक सामग्री याद गर्न मद्दत गर्दछ!
YouTube भिडियोहरूको लागि महान थम्बनेलहरू सिर्जना गर्दै
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, तपाईं आफ्ना थम्बनेलहरू ब्रान्ड र आकर्षक भएको चाहनुहुन्छ। तल थम्बनेलहरूमा हामीले पहिचान गरेका केही सामान्य गुणहरू छन्।
स्पष्ट प्राथमिक वस्तु वा विषय
माथिका यी लक्षणहरू बाहेक, यो प्रस्ट पनि थियो कि प्राथमिक विषयको कटआउट्स, वा मास्क्ड छविहरू सिर्जना गर्नु भनेको एक लोकप्रिय डिजाइन विकल्प हो जुनसँग समय, पैसा, कर्मचारी, वा सीप राख्नेहरू यसलाई तान्नको लागि।
के ले YouTube थम्बनेलहरू महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ
यूट्यूबका लागि छवि डिजाइनिंग सामाजिक नेटवर्कको लागि डिजाईन गर्ने वा वेबमा विज्ञापन छविहरू बनाउने भन्दा धेरै फरक छ। किन? किनभने तपाईंको ब्रान्डले दर्जनौं अन्य ब्रान्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
थम्बनेल, टाढा, एलिमेन्ट हो कि धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ यसलाई सिधा नहेरीकन।
सब भन्दा राम्रो समाचार यो हो कि तपाईं सँधै आफ्नो लाइब्रेरीमा कुनै पनि भिडियोमा फर्केर जान सक्नुहुनेछ र भविष्यमा थम्बनेलहरू अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंको अनुकूलित YouTube थम्बनेलहरू आफूले चाहेको जस्तो ठ्याक्कै मिल्दैन भने।
सरल थम्बनेलको साथ अतिरिक्त ब्रान्डहरू
सबै ब्रान्डहरू तिनीहरूको YouTube थम्बनेल डिजाइनको साथ रचनात्मक हुनको लागि बाहिर जान सक्दैन। वास्तवमा, अधिकांश च्यानलहरूले केहि पनि गरेनन् - उनीहरूले आकर्षक थम्बनेल पनि चयन गरेनन्।
तपाईंको YouTube थम्बनेल डिजाइनहरू सिर्जना गर्दै
अरू केहि विचार गर्नु तपाईंको डिजाइनको स्केलबिलिटी हो। अर्को शब्दहरुमा, के तपाई अधिक टेम्प्लेट डिजाईनको पछि लाग्नुहुन्छ जसको लागि तपाईलाई केवल पृष्ठभूमि, पाठ र र changingहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ वा तपाईले एउटा डिजाईन पछ्याउनुहुन्छ कि नयाँ डिजाइनहरू सिर्जना गर्न पेशेवर इलस्ट्रेटरको आवाश्यक पर्दछ?
एनबीए डिजाइन टेम्पलेट डिजाइन का एक राम्रो उदाहरण हो जुन पुन उत्पादन गर्न सजिलो हुन्छ। आधारभूत डिजाइन कौशलको साथ जो कोही सजिलैसँग अपडेट गरिएको सामग्रीको साथ नयाँ टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्न सक्दछ।
तपाइँको आफ्नै थम्बनेल कसरी बनाउने?
यो वास्तवमै समस्या छैन। यदि तपाईंलाई फोटोशप कसरी प्रयोग गर्ने भनेर थाहा छ भने तपाईं सजिलैसँग आफ्नो भिडियोहरूको लागि भाइरल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईं कुनै अनलाइन YouTube थम्बनेल निर्माता र फोटोशप टेम्प्लेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको कस्टम थम्बनेल छवि सकेसम्म ठूलो हुनुपर्दछ, किनकि छवि पनि इम्बेडेड प्लेयरमा पूर्वावलोकन छविको रूपमा प्रयोग हुनेछ। १२80०x7२० को एक रिजोल्युसन छ (न्यूनतम चौडाई 4040० पिक्सेलको साथ)। JPG, GIF, BMP, वा PNG जस्ता छवि ढाँचामा अपलोड गर्नुहोस्।
युट्यूबमा बढी कमाउने १० तरिकाहरू
यी साधारण १० वा अधिक पोइन्टहरू अनुसरण गर्नुहोस् तपाईंको यूट्यूब भिडियोलाई र्याक पाउनका लागि उनीहरूबाट अधिक दृश्यहरू र डलर प्राप्त गर्न।
⓵ तपाईंको स्वामित्वमा रहेको यूट्यूब च्यानलसँग कुनै सामग्री नभएको भिडियोहरू अपलोड गर्न तपाईंको समय बर्बाद नगर्नुहोस्।
⓶ तपाईंको भिडियोलाई तपाईंको शीर्षकको साथ नाम बदल्नुहोस् त्यसपछि यूट्यूबमा अपलोड गर्नुहोस्। तपाईंको भिडियोको लागि words०० शब्दहरूको आकर्षक वर्णन लेख्नुहोस् र तपाईंको शीर्षकलाई वर्णनको रेखामा टाँस्नुहोस्।
⓷ तपाईंको भिडियो शीर्षक टाँस्नुहोस् जस्तो कि यो ट्यागमा छ। सँधै तपाईंको च्यानलको नाम ट्यागको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसले सुझावमा तपाईंको च्यानल भिडियो देखाउन मद्दत गर्दछ र सान्दर्भिक भिडियो ट्यागहरू थप्न नबिर्सनुहोस् तर ट्यागको रूपमा प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले तिनीहरूलाई वर्णनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अन्यथा यो स्पामिंगको रूपमा विचार गर्दछ।
⓸ तपाइँको सम्बन्धित भिडियो लि links्कहरू र सामाजिक मिडिया पृष्ठहरू लिंकमा वर्णन थप्नुहोस्। ट्विटर वा इन्स्टाग्राममा ह्यासट्यागको साथ भिडियो साझेदारी गर्नुहोस् र एक ट्र्यान्डि tag ट्याग थप्न कोसिस गर्नुहोस्।
⓹ ट्रेंडिंग ट्विटर ट्यागहरू प्रयोग गरेर तपाईंको आलामा सम्बन्धित भिडियो फेला पार्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको च्यानलमा अपलोड गर्नुहोस् र उही ट्रेन्डिग ट्यागको साथ साझा गर्नुहोस्। यो गरेर त्यहाँ धेरै संभावनाहरू छन् कि तपाईंको भिडियोहरू भाइरल छ र यदि भाइरल भयो भने तपाईं निश्चित रूपमा YouTube भिडियोहरू अपलोड गरेर अधिक र अधिक कमाउन जाँदै हुनुहुन्छ। साथै ब्लगर, रेडडिट, टमब्लर, पिन्टेरेस्ट, गुगल प्लस र ट्यागको साथ फेसबुकमा साझेदारी गर्नुहोस्।
⓺ तपाईंको आला र साधारणमा सम्बन्धित एक भिडियो प्रवृत्तिबाट एक ट्रेंडिंग भिडियो फेला पार्नुहोस् यसमा भिडियो बनाउनुहोस् र तपाईंको च्यानलमा अपलोड गर्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईंले आफ्नो भिडियोलाई सामाजिक भाइरल पाउनको लागि अधिक संभावनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ।
⓻ यदि तपाईंलाई एफिलियट मार्केटिंगको बारेमा थाहा छ भने यसले तपाईंलाई तपाईंको च्यानलबाट थप डलर लिन मद्दत गर्दछ। तपाइँको कोठा सम्बन्धित एक सही उत्पादन छनौट गर्नुहोस् र त्यसमा एक क्याच भिडियो बनाउनुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गरिसके पछि वर्णनको पहिलो पंक्तिमा तपाईंको सम्बद्ध लिंक टाँस्नुहोस् ताकि यदि कसैले तपाईंको उत्पादन किन्नको लागि उसको / उनको मुड बनायो भने उसले / उसले तपाईंको लिंकलाई यसलाई किन्नको लागि अनुसरण गर्न सक्दछ। त्यसैले सम्बद्ध अधिक कमाउनको लागि साँच्चै उत्तम तरिका हो।
⓼ क्वालिटी होइन क्वालिटीमा फोकस गर्नुहोस् र उच्च सीपीसी किवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको च्यानल दृश्यहरू बढाउन यी सरल सुझावहरू पालना गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा YouTube बाट अधिक र अधिक कमाउन मद्दत गर्दछ।
⓽ राम्रो सीपीसी दर छ र उच्च सीपीसी कीवर्ड फेला पार्न प्रीमियम देशहरूलाई लक्षित गर्नुहोस्।
⓾ तपाईंको भिडियोको लागि अनुकूलन यूट्यूब थम्बनेल छवि बनाउनुहोस् जसले गर्दा मानिसहरूले यो चाखलाग्दो भेट्टाउँछन्। यदि तपाइँ अनुकूलन थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर जान्नुहुन्न भने तपाइँ केवल त्यसलाई ती भिडियोहरुबाट प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाखलाग्दो र तपाइँको भिडियोसँग सम्बन्धित छ। चाखलाग्दो थम्बनेलले सँधै व्यक्तिहरूको ध्यान खिच्छ र तिनीहरूलाई त्यो भिडियो हेर्न बाध्य पार्दछ। त्यसैले यो दिमागमा राख्नुहोस्।
यूट्यूब र Vimeo भिडियो थम्बनेल छविहरू सबै गुण नि: शुल्कको लागि बचत गर्नुहोस्। यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई सबै गुणवत्ताको थम्बनेलहरू डाउनलोड गर्न दिन्छ। केवल तल इनपुटमा थम्बनेल भिडियोको URL टाँस्नुहोस् र थम्बनेल छवि प्राप्त गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ YouTube थम्बनेल Grabber - यूट्यूब भिडियो थम्बनेल बचाउनुहोस्
पूर्ण यूट्यूब भिडियो थम्बनेल छवि डाउनलोड गर्नुहोस् पूर्ण HD (1080), HD (720), SD, र सानो आकारमा पनि। यो हाल समर्थित ढाँचा हो: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
प्रतिलिपि अधिकार © 2019
तपाईंको समर्थन देखाउनुहोस् र यो वेबसाइट साझा गर्नुहोस्:
मैले यो थम्बनेल डाउनलोडर सेवा मेरो आगामी प्रोजेक्टको लागि स्प्ल्याश स्क्रीनहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्‍यो। यस्तो समय बचतकर्ता, सायद मलाई समग्रमा घण्टाको समय बचत गर्न सक्छ र राम्रोसँग कार्य गर्दछ।
बारेमा TOS गोपनीयता नीति हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस Sitemap Facebook